बाबुसाहेब (कथा) | kd's Blog Nepal
रामप्रसादको कान्छो छोरो कुसंगततिर लाग्न थालेको जस्तो थियो । ‘छोराको संगत साँच्चै न नराम्रो दिशातिर हुन थाल्यो भने नराम्रो पर्ला । छोरो ता बिग्रन्छ बिग्रन्छ परिवारलाई समेत तनावको विषय हुन सक्छ !’ उनलाई यस्तै चिन्ता परिरहेको थियो । उसको दाजुचाहिंलाई गरिएजति खर्च ता उसलाई पनि ता गर्नु पर्ला । गरिएको खर्च पनि
फेरि पानीमा जाने हो कि ! उनी विभिन्न थरिका चिन्ताले ग्रस्त थिए । अझ उनका छोराले लामालामा नङ पालेर नेल पालिस समेत लाएकोे देखेपछि ता झनै चिन्तित थिए । त्यसमाथि कानमा मुन्द्री लगाएको छ, कपाल घोडाको जगर जस्तो पारेर काटेको छ, बोली पनि केही कोक्याए जसरी बोल्दछ । ‘अब यसलाई पुरानै बाटोमा लगेर सपार्न सकिएला के त !’ उनको यो कान्छो छोरो उनका मनभरि गम्भीर प्रश्न बनेको थियो । यसलाई कतै न कतै कुनै रुपमा अल्झाउन पाए सप्रने दिशातिर लाग्थ्यो कि ! बडो व्यग्र ढंगले उनी आशा गरिरहेका थिए ।यसै बेला एकाएक त्यो ठाउमा बाबुसाहेबको चर्चा शिखरमा पुग्यो । बाबुसाहेब को थिए, कताबाट आएका थिए, कसका के पर्थे त्यो सबै कसैलाई थाहा थिएन । उनका बारेमा जनसमुदायबाट छ्वास्सछुस्स कुराहरु मात्र सुनिन्थे । उनी बिहानै उठेर कतै जान्थे र अपरान्हतिर मात्र डेरामा फर्कन्थे । वास्तवमा उनी को हुन् ? यो प्रश्नका उत्तर विभिन्न ढंगका थिए । जस्तै—
kd's Blog Nepal: बाबुसाहेब (कथा)